Volamena 3, 600 kg : Sarona teo Ivato -
AccueilRaharaham-pirenenaVolamena 3, 600 kg : Sarona teo Ivato
Volamena 3, 600 kg : Sarona teo Ivato
02/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Bolongam-bolamena miisa efatra, milanja 3,600 kilao no tra-tehaka teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 02 ora sy sasany antoandro. Nokasaina lehilahy izay teratany malagasy haondrana an-tsokosoko tany ivelany ireto volamena ireto no izao sarona izao. Efa nandalo tamin’ireo fisavana sy sivana maro ny entan’ity ranamana ity saingy rehefa tonga teny amin’ny toerana fiondranana (piste) , izay fari-piadidian’ny zandary miasa ao amin’ity seranam-piaramanidina ity vao tratra ireo harem-pirenena ireo. Hentitra ary tampoka ny fisavana ka tsy nampoizin’ity lehilahy ity, ka tsy afa-niala intsony ny tenany. Tratra tao anatin’ny entany ireo bolongam-bolamena ireo. Handeha hisidina ho any Johannesburg tamin’ny zotra Air Link ny tenany izao tra-tehaka niaraka tamin’ny harem-pirenena nokasaina haondrana an-tsokosoko izao. Ny fahazoam-baovao azo dieny mialoha avy amin’ny olona tsara sitrapo no nanampy sy nanamora ny fahatratrarana ireo volamena 3,600 kilao ireo. Noho ity resaka fanondranana harem-pirenena ity, izay tsy mety voafehy mihitsy, dia nanavao fomba fiasa ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ary tsapa fa nahitam-bokany izany, tamin’ny alalan’ny fahatratrarana ireo olona maro, mpamadika firenena.
Hentitra ny fanjakana amin’ny fanenjehana an’ireo fanetriben’ny firenena. Vao haingana no tra-tehaka ny mpanondrana andramena tany Cap Masoala. Voapaingotra koa ny mpanao pasipaoro sandoka, izay efa nahazo vola be tamin’io raharaha maizina io koa. Izao indray tra-tehaka ny mpanondrana an-tsokosoko volamena. Mahavelombolo izany ary ahitana taratra fa vonona hamongotra an’ireo mpangorona ny harem-pirenena ny fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ny mahagaga amin’ity raharaha ity, na dia fantatr’ireo mpanondrana harem-pirenena ireo aza fa henjana ny sazy miandry azy ireo amin’io afera maloto io dia hita maso sy azo tsapain-tanana mihitsy , fa tsy mety fay ary vao mainka maro no mahasahy manao izany . Tsy tamin’ny andron’ny gaboraraka intsony anefa izao fa efa amin’ny andron’ny fanarahan-dalàna. Ireo efa zatra ny lalan-dririnina amin’izany dia raisim-potsiny avokoa tahaka ity vao tratra tamin’ny talata ity. ”Tsy mandefitra ny zandarimaria amin’ny fahatratrarana olona manondrana harem-pirenena, na iza io na iza. Tsy manaiky ny kolikoly ihany koa izahay”, hoy ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, omaly. Tamin’ny fanadihadiana natao an’ity olona voasambotra ity no nahafantarana fa ny zotra hisidina any Torkia, Nairobi ary Johannesburg no tena hahitana ity fanondranana volamena an-tsokosoko ity. Hihamafy hatrany noho izany ny fisavana ireo olona miditra sy mivoaka eny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato mba tsy hampirongatra sy hialana amin’ny fanondranana harem-pirenena eto Madagasikara.